4 waxyaabood oo aan wanaagsanayn in la sameeyo cuntada kagadaal. - Tilmaan Media
Wakhtigoo yar awgiis waxaan quraacda ku dul cabnaa shaah isla wakhti yar kadibna waan qubaysannaa, laakiin waa in dib u eegid lagu sameeyaa caadooyinkaas iyo kuwa kale oo keena calool xanuun iyo daal.
Haddaba warbixintaan Ayaan ku soo qaadanaynaa 4 caado oo wargayska laga leeyahay dalka Spain ee loo yaqaan Khinial uu ku sheegay in ay caafimaad dadka dhibaato u keenaan haddii la sameeyo cunada kadib.
Marka qofku qubaysanayo waxaa kor ukac yar ku yimaadaa heerkulka jirka, sidaas darted jirku wuxuu dhiig dheeraad ah kusii daayaa maqaarka, arintaan ayaa keenaysa in gaabis ku yimaado shaqada dheefshiidka. Sidaas darteed waxaa caafimaad ahaan wanaagsan in la qubaysto 30 daqiiqo kadib cunto cunidda.
2. Shaah cabidda
Dad badan waxaa caado u ah in ay shaah cabbaan xilliyada qadada. Laakiin sida baaritaanadu muujiyeen shaahu wuxuu hor istaagaa dhuuqidda ama qaadashada jirka ee birta. Birta ayaa ah walax aad muhiim ugu ah caafimaadka dadka, gaar ahaan dadka qaba dhiig yarida.
Sidaas darteed khuburada caafimaadku waxay kula taliyaan dadka birtu ku yartahay, dumarka uurkale iyo caruurta in ay shaaha cabbaan ugu yaraan hal saac kadib cunto cunidda.
Daraasaadka qaybtood waxay beeniyeen arinta aadka loo rumaysan yahay ee ah in cuntada kagadaal oo la seexdo ay miisaanka kordhiso, laakiin haddana lama diidi karo dhibka ka dhalan kara caadadaan, caloosha oo loo seexdo cuntada kadib wuxuu keeni karaa culays iyo xanuun caloosha ah.
Khubrada caafimaadku waxay isku raacsan yihiin inay wanaagsan tahay caafimaad ahaan in la seexdo ugu yaraan labo saac kadib cunto cunidda.
4. Layli samaynta
Khuburada caafimaadku kuma taliyaan in layli jireed (Sports) la sameeyo cuntada kagadaal, sababo la xiriira dhibaatooyin caafimaad oo ka imaan kara. Laakiin qofkii aan dayn Karin waxaa wanaagsan in uu sameeyo socod tartiib ah. Wixii kale oo layli jireed ah waxaa haboon in la sameeyo ugu yaraan labo saac kadib cunto cunidda.
Qoraalka waxaa lagasoo Turjumay Aljazeera